နယူးကာဆယ်လ်ကို အနိုင်ယူပြီး ဇယားထိပ်တက်ဖို့ အမှတ်စုဆောင်းတဲ့ စီးတီး – Sports A2Z
Match Report • Premier League
နယူးကာဆယ်လ်ကို အနိုင်ယူပြီး ဇယားထိပ်တက်ဖို့ အမှတ်စုဆောင်းတဲ့ စီးတီး
မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းအနေနဲ့ လက်ရှိမှာ ရပ်တည်နေရတဲ့ အနေအထားကနေ တဖြည်းဖြည်း အဆိုးတွေထဲက ရုန်းထွက်လာခဲ့ပြီး နယူးကာဆယ်လ်ယူနိုက်တက်ကို အိမ်ကွင်းမှာ အမှားအယွင်းမရှိ အနိုင်ယူပြီး ပိုမိုကြီးမားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေအတွက် ရမှတ် သုံးမှတ်ကို ထပ်မံစုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဝေါ်လ်ကာနဲ့ ဂျေဆူးစ်တို့ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရလို့ မပါဝင်နိုင်ချိန်မှာ အာကေနဲ့ ကန်ဆယ်လိုတို့ တစ်ပြိုင်တည်း ပွဲထွက်လာခဲ့ကြပြီး တိုက်စစ်ကိုတော့ စတာလင်နဲ့ ဖယ်ရန် တောရက်စ်တို့က ဦးဆောင်ခဲ့ကြသလို ဒီဘရိုင်နား၊ ဘာနာဒိုနဲ့ ဂွန်ဒိုးဝမ်တို့က ကွင်းလယ်မှာ တွဲဖက်လာခဲ့ကြတာပါ။
ပွဲချိန် ၁၄ မိနစ်မှာတော့ မန်စီးတီးတို့ အဖွင့်ဂိုးရခဲ့ပြီး ဒီဂိုးကိုတော့ စတာလင်က သူဂိုးသွင်းယူဖို့ကို နယူးကာဆယ်နောက်ခံလူတွေနဲ့ ဂိုးသမား ဒါလိုးတို့ ပိတ်ဆို့နေချိန်မှာ မကန်တော့ဘဲ အခွင့်အရေးသာနေတဲ့ ဂွန်ဒိုးဝမ်ဆီ ပို့ပေးခဲ့ရာမှာ ကွင်းလယ်လူက သူ့ရဲ့ ဒီရာသီ ဒုတိယဂိုးအဖြစ် သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လူကျွံထောင်ချောက်ကို အကြိမ်ကြိမ် ဖောက်ထွက်နေတဲ့ စတာလင်၊ တောရက်စ်နဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဒီဘရိုင်းနားတို့ အခွင့်အရေးတွေကို အသုံးမချနိုင်ခဲ့လို့ ပထမပိုင်းမှာ စီးတီးတို့ တစ်ဂိုးနဲ့ပဲ ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့ပွဲမှာ ဖရီးကစ်တွေကနေ ခေါင်းတိုက်ချပြီး ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ စတုန်းစ်ရဲ့ ပေးပို့မှုတွေကိုလည်း ဘယ်သူမှ အသုံးမချနိုင်ခဲ့တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ပွဲချိန် ၅၅ မိနစ်မှာတော့ ညာတောင်ပံက ထိုးဖောက်လာပြီး ချိုးပေးတဲ့ ကန်ဆယ်လိုရဲ့ အနိမ့်ဘောဖြတ်တင်မှုကို နယူးကာဆယ်လ်ခံစစ်က ရှင်းထုတ်ပုံ မပီပြင်မှုကြောင့် ထွက်လာခဲ့တဲ့ ဘောလုံးကို တောရက်စ်က အပိုင်ကန်သွင်းပြီး စီးတီးတို့အတွက် ဒုတိယမြောက် အနိုင်ဂိုးကို ရယူသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ တောရက်စ်ရဲ့ အခွင့်အရေးနှစ်ကြိမ် လွဲချော်ခဲ့သလို စတာလင်ကလည်း ဘောလုံးထိန်းသိမ်းပုံ မကောင်းခဲ့လို့ ရှင်းထုတ်ခံခဲ့ရပြီး ပွဲချိန် မိနစ် ၈၀ မှာတော့ လူစားဝင်တိုက်စစ်မှူး အဂွေရိုရဲ့ အပိုင်ကန်ချက်ကို နယူးကာဆယ်လ်ဂိုးသမား ဒါလိုးက ပုတ်ထုတ်သွားခဲ့လို့ နှစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ပဲ ပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲကို အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းအနေနဲ့ အမှတ်ပေးဇယားမှာ ရမှတ် ၂၆ မှတ်နဲ့ အဆင့် ၅ ကို ပြန်လည်တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ အသင်းနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ နေရာမျိုးမှာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ နီးစပ်လာခဲ့သလို ဇန်နဝါရီမှာ အသင်းကို အားဖြည့်ဖို့အတွက်လည်း ပိုင်ရှင်တွေဆီက စေတနာရှိစရာ ပုံစံကို ပြသနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း သုံးသပ်လိုက်ရပါတယ်။
PHOTOS CREDIT TO OWNERS
ZAWGYI: မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းအေနနဲ႔ လက္ရွိမွာ ရပ္တည္ေနရတဲ့ အေနအထားကေန တျဖည္းျဖည္း အဆိုးေတြထဲက ႐ုန္းထြက္လာခဲ့ၿပီး နယူးကာဆယ္လ္ယူႏိုက္တက္ကို အိမ္ကြင္းမွာ အမွားအယြင္းမရွိ အႏိုင္ယူၿပီး ပိုမိုႀကီးမားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြအတြက္ ရမွတ္ သုံးမွတ္ကို ထပ္မံစုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ေဝၚလ္ကာနဲ႔ ေဂ်ဆူးစ္တို႔ ကိုဗစ္ကူးစက္ခံရလို႔ မပါဝင္ႏိုင္ခ်ိန္မွာ အာေကနဲ႔ ကန္ဆယ္လိုတို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း ပြဲထြက္လာခဲ့ၾကၿပီး တိုက္စစ္ကိုေတာ့ စတာလင္နဲ႔ ဖယ္ရန္ ေတာရက္စ္တို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသလို ဒီဘ႐ိုင္နား၊ ဘာနာဒိုနဲ႔ ဂြန္ဒိုးဝမ္တို႔က ကြင္းလယ္မွာ တြဲဖက္လာခဲ့ၾကတာပါ။
ပြဲခ်ိန္ ၁၄ မိနစ္မွာေတာ့ မန္စီးတီးတို႔ အဖြင့္ဂိုးရခဲ့ၿပီး ဒီဂိုးကိုေတာ့ စတာလင္က သူဂိုးသြင္းယူဖို႔ကို နယူးကာဆယ္ေနာက္ခံလူေတြနဲ႔ ဂိုးသမား ဒါလိုးတို႔ ပိတ္ဆို႔ေနခ်ိန္မွာ မကန္ေတာ့ဘဲ အခြင့္အေရးသာေနတဲ့ ဂြန္ဒိုးဝမ္ဆီ ပို႔ေပးခဲ့ရာမွာ ကြင္းလယ္လူက သူ႔ရဲ႕ ဒီရာသီ ဒုတိယဂိုးအျဖစ္ သြင္းယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
လူကြၽံေထာင္ေခ်ာက္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဖာက္ထြက္ေနတဲ့ စတာလင္၊ ေတာရက္စ္နဲ႔ ကြင္းလယ္လူ ဒီဘ႐ိုင္းနားတို႔ အခြင့္အေရးေတြကို အသုံးမခ်ႏိုင္ခဲ့လို႔ ပထမပိုင္းမွာ စီးတီးတို႔ တစ္ဂိုးနဲ႔ပဲ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒီေန႔ပြဲမွာ ဖရီးကစ္ေတြကေန ေခါင္းတိုက္ခ်ၿပီး ဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့ စတုန္းစ္ရဲ႕ ေပးပို႔မႈေတြကိုလည္း ဘယ္သူမွ အသုံးမခ်ႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။
ပြဲခ်ိန္ ၅၅ မိနစ္မွာေတာ့ ညာေတာင္ပံက ထိုးေဖာက္လာၿပီး ခ်ိဳးေပးတဲ့ ကန္ဆယ္လိုရဲ႕ အနိမ့္ေဘာျဖတ္တင္မႈကို နယူးကာဆယ္လ္ခံစစ္က ရွင္းထုတ္ပုံ မပီျပင္မႈေၾကာင့္ ထြက္လာခဲ့တဲ့ ေဘာလုံးကို ေတာရက္စ္က အပိုင္ကန္သြင္းၿပီး စီးတီးတို႔အတြက္ ဒုတိယေျမာက္ အႏိုင္ဂိုးကို ရယူသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေတာရက္စ္ရဲ႕ အခြင့္အေရးႏွစ္ႀကိမ္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့သလို စတာလင္ကလည္း ေဘာလုံးထိန္းသိမ္းပုံ မေကာင္းခဲ့လို႔ ရွင္းထုတ္ခံခဲ့ရၿပီး ပြဲခ်ိန္ မိနစ္ ၈၀ မွာေတာ့ လူစားဝင္တိုက္စစ္မႉး အေဂြ႐ိုရဲ႕ အပိုင္ကန္ခ်က္ကို နယူးကာဆယ္လ္ဂိုးသမား ဒါလိုးက ပုတ္ထုတ္သြားခဲ့လို႔ ႏွစ္ဂိုး-ဂိုးမရွိနဲ႔ပဲ ပြဲၿပီးဆုံးခဲ့ပါတယ္။
ဒီပြဲကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းအေနနဲ႔ အမွတ္ေပးဇယားမွာ ရမွတ္ ၂၆ မွတ္နဲ႔ အဆင့္ ၅ ကို ျပန္လည္တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အသင္းနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ နီးစပ္လာခဲ့သလို ဇန္နဝါရီမွာ အသင္းကို အားျဖည့္ဖို႔အတြက္လည္း ပိုင္ရွင္ေတြဆီက ေစတနာရွိစရာ ပုံစံကို ျပသႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း သုံးသပ္လိုက္ရပါတယ္။
27 Dec နံနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ စုစည်းမှု
ပြတ်သားတဲ့ရလဒ်နဲ့ ချဲလ်ဆီးကို အနိုင်ယူပြီး ရလဒ်ဆိုးတွေက ရုန်းထွက်ခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်
Article • La Liga • Ligue1 • Premier League
၂၀၂၁ နွေရာသီမှာ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်ခဲ့ကြတဲ့...
Analysis • Article • Premier League
အာဆင်နယ်တို့ ထိပ်ဆုံးလေးနေရာဝင်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်း...
ဘင်နီတက်ဇ်အလွန် အဲဗာတန်နည်းပြသစ် ဖြစ်လာဖို့...
ပိုက်ဆံမျက်နှာနဲ့ အာဆင်နယ်ကို စွန့်ခွာခဲ့တယ်လို့...
Copyright © 2022. Created by Sports A2Z.